CASE တည်ဆောက်ရေး စက်ယန္တရား (MM) သီးသန့်ဥပဒေများ
CNH စက်မှုလုပ်ငန်း၏ သီးသန့်မူဝါဒ
ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀က်ဆိုဒ်အား လေ့လာကြည့်ရှု၍ ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများအား စိတ်ဝင်တစားရှိမှုအပေါ် CNH စက်မှုလုပ်ငန်းစုမှ များစွာကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ သင်၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်များ မှတ်တမ်းတင်ထားရှိခြင်းကိုလည်း ကျွန်ုပ်တို့၏ အရေးကြီးလုပ်ငန်းတာဝန်များအဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး လုံခြုံမှု ရှိစေရန် အထူးဂရုစိုက်စောင့်ရှောက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ၀က်ဆိုဒ်ကြည့်ရှုနေချိန်တွင် လူကြီးမင်းတို့ ၀င်ရောက်ကြည့်ရှုသည့် တိုင်းပြည်များ၏ ဥပဒေစီမံချက်တို့ပေါ်မူတည်၍ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်တို့ကို မှတ်တမ်းတင်သွားမည်ဖြစ်သည်။
ဤမူဝါဒအား လူကြီးမင်းတို့မှ ကျွန်ုပ်တို့အား တင်ပြပေးထားသော ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်တို့ နှင့် စပ်လျဉ်း၍ အသုံးချသွားမည်ဖြစ်သည်။
CNH စက်မှုလုပ်ငန်းမှ သင့်အကြောင်းဘာတွေ စုစည်းထားပါသလဲ?
CNH စက်မှုလုပ်ငန်းအဖွဲ့သည် ၎င်းတို့၏ ၀န်ထမ်းများ၊ ကန်ထရိုက်တာများ၊ ဆက်စပ်ပစ္စည်းထောက်ပံ့သူများ ၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်တို့အား အောက်ဖော်ပြပါ စီးပွားရေး ရည်ရွယ်ချက်တို့ဖြင့် စပ်လျဉ်း ၍ မှတ်တမ်းတင်စုစည်းထားသည်။ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များတွင် သင်၏နာမည်၊ ဆက်သွယ် ရန် လိပ်စာ၊ ငွေပေးချေမှုနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် အချက်အလက်တို့သာမက အကြွေးဝယ်ကတ်နှင့် ပတ်သက် သည့် အချက်အလက်များလည်း ပါဝင်ပါသည်။ သင့်အတွက် အကောင်းဆုံးသော သတိပေးမှုများ ပြုလုပ် ပေးနိုင်ရန်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ၀န်ဆောင်မှုများအား စဉ်ဆက်မပြတ်တိုးမြှင့် ပေးနိုင်ရန် အလို့ငှာ သင်၏ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုများ၊ သင့်နောက်ကြောင်းရာဇ၀င်၊ CASE ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတို့နှင့် ၀န်ဆောင် မှုတို့ နှင့် ပတ်သက်၍ အတွေ့အကြုံများအပြင် သင်နှင့်သက်ဆိုင်သော အသေးစိတ်အချက်အလက်တို့ကို ပါ မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ အချို့သော Website များသုံးရာတွင် လူကြီးမင်း၏ IP လိပ်စာကို အသုံးပြုနိုင်သည်။ ဖိုင်အငယ်များဖြင့် သိမ်းဆည်းထားခြင်းဆိုသည့် cookies နည်းလမ်းကို အသုံးပြုပြီး၊ ယင်းနည်းလမ်းတွင် cookies မူဝါဒ၏ အချက်အလက်တို့ကို တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များဆိုရာဝယ် တိတိကျကျမသတ်မှတ်နိုင်သော (သို့) ပုံမှတ်အချက် အလက်သာပါဝင်သော မှတ်တမ်းများ (သို့) သီးခြားဖြည့်ရသော အချက်များတွင် သတ်မှတ်ချက် မပေး နိုင်သော ၊ ပြန်၍ ဖြည့်တင်းရသော အပယ်ခံရသည့် မှတ်တမ်းများ အစရှိသည်တို့ မပါဝင်ပေ။
သင်၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ မှတ်တမ်းများကို CNH စက်မှုလုပ်ငန်းမှ မည်ကဲ့သို့ အသုံးပြုမည်နည်း။
အောက်ဖော်ပြပါ ရည်ရွယ်ချက်များဖြင့် အတော်အတန် ဆက်စပ်ဆီလျော်သော သင်၏ အချက်အလက် တို့ကိုသာ CNH မှ အသုံးပြုပါသည်။
တရားဝင်ဖြစ်သော စီးပွားရေး ရည်ရွယ်ချက်များ ရည်ညွှန်းချက်များတွင် သတ်မှတ်မထားသော၊ ၀န်ဆောင် မှုများပေးခြင်း၊ ငွေကြေးအခြေအနေ၊ ဖောက်သည်တို့အား ထောက်ပံ့ပေးမှု၊ ထုတ်ကုန်များ၏ လုံခြုံမှု၊ ဈေး ကွက်ရှာဖွေခြင်း၊ အရောင်းမြှင့်တင်ခြင်းနှင့် ၀န်ထမ်းဖြည့်တင်းမှုများအား သက်ဆိုင်ရာ နည်းနာနိသယများ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအတိုင်း ရည်ညွန်းချက်များ ပြည့်စုံစေရန် အားထုတ်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် သင်၏ လျို့ဝှက်ကုဒ်နံပါတ်အား သတိပေးခြင်း (သို့) ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရန် အချိန်ကျရောက်လာပါက အသိ ပေးခြင်းတို့ဖြစ်သည်။
Company ၏ မှတ်တမ်းမှတ်ရာတို့အား ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းနိုင်ရန် အဖွဲ နည်းစနစ်များဖြင့် လုပ်ငန်းစဉ် အဆင့်ဆင့်အား ပြုလုပ်ခွင့် ပြုထားသည်။ ယင်းလုပ်ငန်းစဉ်တို့တွင် အချက်အလက်တို့အား အမျိုးအစား ခွဲခြား သတ်မှတ်ခြင်းများ၊ လုံခြုံရေး လိုအပ်ချက်တိုင်းတာခြင်းများ ပါဝင်သည်။
အသုံးချဥပဒေတို့နှင့် စပ်လျဉ်း၍ သင်၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အရ အသုံးပြုရပါကလည်း မည်သည့်ရည်ရွယ်ချက်ကြောင့် အသုံးပြုရသည်ဆိုသည်ကို သင့်အား အကြောင်းကြား ပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။
သင်သဘောတူညီမှုရယူထားသည့် ၀န်ဆောင်မှုများ ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်လာပါက CNH စက်မှုလုပ်ငန်းမှ သင့်အား ဆက်သွယ်လာပါမည်။
ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုပြုထားသည့် လူကြီးမင်းတို့၏ အခွင့်အရေးများ (ဥပမာ- ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ အသုံးပြုခြင်း၊ အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းများပြုလုပ်နိုင်ခြင်း၊ အချက်အလက်များပြင်ဆင်ခြင်း (သို့) ပေါင်းစပ်ခြင်း၊ အသုံးချသည့် ဥပဒေများအရ မလိုအပ်သည့်အချက်များပယ်ဖျက်ခြင်း) စသည်တို့ကို CNH စက်မှုလုပ်ငန်းစုမှ လေးစားစွာ အသိအမှတ်ပြုပါသည်။
လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာ ရည်ရွယ်ချက်များ၊ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာခွင့်ပြုချက် ရရှိထားသည့် အချက်အလက်များအား ဥပဒေအရလိုအပ်လာပါက တတိယအဖွဲ့အစည်းမှလည်း မြင်သာထင်သာ ရှိစေရမည်ဖြစ်သည်။
CNH စက်မှုလုပ်ငန်းမှ အသုံးချနည်းလမ်းများအား တိုးမြှင့်ခြင်းပြုလုပ်ရာတွင်လည်း online မှတဆင့် လူကြီးမင်း တို့အား ကြေငြာအသိပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။
- ယှဉ်ပြိုင်မှုတို့အား စီမံကြီးကြပ်၍ အနိုင်ရရှိသူအား ဆက်သွယ်ပေးရန်။
- ၀န်ဆောင်မှုများ အသုံးပြုရာတွင် အထောက်အပံ့ပေးရန်နှင့် လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း အထွေထွေ အုပ်ချုပ်မှုပိုင်းဆိုင်ရာ အကြံဥာဏ်များပေးရန်။
- ၀န်ဆောင်မှုနှင့် သတင်းအချက်အလက်ပိုင်းဆိုင်ရာတို့တွင် အမှာလွှာများ၊ တောင်းဆိုလွှာများအား ဖြေရှင်းပေးရန်၊ ငွေပေးချေမှုနှင့် မှတ်တမ်းတင်ထားရှိမှုတို့အား အချိန်နှင့် တပြေးညီရှိစေရန်။
- ယင်းရည်ရွယ်ချက်တို့ကိုသဘောတူညီ၍ ဆက်သွယ်လာမည်ဆိုပါက တယ်လီဖုန်းဖြင့် တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပြီး သင်စိတ်ဝင်စားသည့် လက်ရှိထုတ်ကုန်ပစ္စည်း (သို့) ထုတ်ကုန်သစ်တို့အတွက် အထူးအမှာလွှာပြုလုပ်၍ email ပို့ပေးရမည်ဖြစ်သည်။
သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်တို့က အခြားသောရည်ရွယ်ချက်တို့တွင် အသုံးပြုမည်ဆိုပါက CNH မှ သင့်အားဦးစွာ အသိပေးမည်ဖြစ်ပြီး သင့်အနေဖြင့် သဘောတူညီမှုမရှိပါက ငြင်းဆန်နိုင်သည်။
နိုင်ငံရေးအမြင်၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအယူအဆ၊ လူမျိုးရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့် ဆေးဝါးဗဟုသုတ၊ ဘာသာရေးဆိုင်ရာ ယုံကြည်မှုများ၊ နိုင်ငံကူးလူးဆက်ဆံခြင်း အစရှိသည့် ထိရှလွယ်သည့် အချက်အလက်များနှင့် တရားဥပဒေအရ လုပ်ဆောင်ရသော အချက်များ ဖြည့်တင်းခြင်းတို့သည် စီးပွားရေးဦးတည်ချက်များ အောင်မြင်စေရေးအတွက် လူကြီးမင်းတို့၏ အမှန်တကယ် ခွင့်ပြုချက်များရရှိမှသာလျှင်၊ အသုံးပြုထားသော ဥပဒေလမ်းကြောင်းအတိုင်း ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်သည်။ သင်၏ထိရှလွယ်သော အချက်များအား ကိုယ်စားလှယ်မဟုတ်သော အဖွဲ့မှ အသုံးပြု ခြင်း(သို့) အခြားသော ရည်ရွယ်ချက်တို့ဖြင့် အသုံးပြုပါက သင့်ထံသို့တရားဝင်ခွင့်ပြုချက် တောင်းခံလာမည် ဖြစ်သည်။
CNH စက်မှုလုပ်ငန်းသည် သင့်ကိုယ်ရေးအချက်တို့ကို မည်သူအား မျှဝေသနည်း။
ယေဘူယျအားဖြင့် လူကြီးမင်း၏ အချက်အလက်များအား CNH ကုမ္ပဏီများအတွင်း ၀န်ဆောင်မှုနှင့် ကုန်ပစ္စည်းများ အထောက်အကူပြုရေးတွင်သာ အသုံးပြုသည်။ အခြားသော CNH အဖွဲ့ဝင်များအား ဈေးကွက်ရှာဖွေရေးသဘောဖြင့် သင်၏ ခွင့်ပြုချက်မပါရှိဘဲ သင်၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို အသုံးပြုစေမည်မဟုတ်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ညွှန်ကြားချက်များအတိုင်း တိတိကျကျလိုက်နာသော တတိယအဖွဲ့အစည်းများကို လိုအပ်ပြီး လူကြီးမင်းတို့၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်တို့အား ၎င်းတို့၏ စီးပွားရေးရည်ရွယ်ချက်များအတွက် အသုံးမပြုရန် လမ်းညွှန်ထားပြီးဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့မှ တတိယအဖွဲ့အစည်းသို့ မျှဝေလိုက်သော လူကြီးမင်း၏ အချက်များအား ကျွန်ုပ်တို့နည်းတူ ထိန်းသိမ်းထားမည်မှာ သေချာပါသည်။ တတိယအဖွဲ့အစည်းသို့ သင့်အချက်အလက်များ လွဲပြောင်းပေးပို့လိုပါက သင့်အနေဖြင့် ရွေးချယ်ရန် အခွင့်အရေးရှိပါသည်။
သင့်အား ဆက်သွယ်ရန် သင်၏ကိုယ်ရေးအချက်တို့အား CNH စက်မှုလုပ်ငန်းမှ မည်သည့်အချိန်တွင် ဆက်သွယ်လာ မည်နည်း
CNH စက်မှုလုပ်ငန်းမှ သင့်အားဆက်သွယ်လာပါမည်။
သင်သဘောတူထားသော စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ၀န်ဆောင်မှုတို့နှင့် ပတ်သက်၍ CNH မှ ၀န်ဆောင်မှုများ ပေးနိုင်မည့်အချိန်တွင် သင့်အားဆက်သွယ်လာပါမည်။
CNH စက်မှုလုပ်ငန်း ၀က်ဆိုဒ်သို့ ၀င်ရောက်၍ စာတိုပို့ခြင်းများ၊ အခြားဝန်ဆောင်မှုများ စသည်ဖြင့် ထောက်ပံ့မှုတစ်စုံ တစ်ရာပြုလုပ်လာချိန်တွင် သင့်အားဆက်သွယ်လာပါမည်။
အသိပေးစာများ (သို့မဟုတ်) အခြားဆက်နွယ်ချက်များရရှိခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ၊
CNH စက်မှုလုပ်ငန်း၏ ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ၊ ၀န်ဆောင်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ စေတနာ့ဝန်ထမ်းပါဝင်ရန် ဖိတ်ခေါ်သည့် စစ်တမ်းတွင် ပါဝင်ရန်၊
လူကြီးမင်းနှင့် CNH စက်မှုလုပ်ငန်းကြား ချုပ်ဆိုထားရှိသော တာဝန်ဝတ္တရားတို့အား လုပ်ဆောင်ရန်၊ေ* ဈးကွက်မြှင့်တင်ရေးရည်ရွယ်ချက်တို့ CNH မှ သင့်အားဆက်သွယ်မည်လား ဆိုသည်ကို အောက်တွင်ဆက်ကြည့်ပါ။
တိကျသော ကုန်ပစ္စည်းများ ၀န်ဆောင်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ CNH မှ သင့်အား မည်သို့ဆက်သွယ်ရမည်ကို ကျွန်ုပ်တို့ ၀က်ဆိုဒ်မှ သင့်အားအသေးစိပ်အချက်အလက်များပေးပါမည်။
CNH မှ ဈေးကွက်ရှာဖွေရေး ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် သင့်အား ဆက်သွယ်လာမည်လား ?
တခါတရံ သင်၏ကောင်းကျိုးကို မျှော်ကိုး၍ ဈေးကွက်ရှာဖွေခြင်းအချက်အလက်များ၊ ဈေးကွက်လေ့လာခြင်းများကို သင်၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ အသုံးပြု၍ သင့်ဆီကို ဆက်သွယ်ပါသည်။ ဒါပေမယ့် (သို့ရာတွင်) ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် သင့်အား ဈေးကွက်ရှာဖွေခြင်း (သို့) ဈေးကွက်စစ်တမ်းမှတ်တမ်းယူခြင်းတို့ကို ခြွင်းချက်အနေဖြင့် ခွင့်ပြုထားပါသည်။ သင့် အနေဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ဆက်ဆံရာတွင် နှစ်သက်မှုမရှိပါက ကျွန်ုပ်တို့အား မေးမြန်းခြင်းမရှိဘဲ အတိအလင်းပြောကြားနိုင် ပါသည်။ ဒါ့အပြင် သင်၏ သဘောတူညီရှိခဲ့မှုတို့အား အချိန်မရွေးပြန်လည် ရုတ်သိမ်းနိုင်ပါသည်။
မသင့်တော်သော (သို့မဟုတ်) ထိခိုက်စေသော အငြင်းပွားမှု
သူတပါးအား ထိခိုက်စေသော အကြောင်းအရာအား CNH စက်မှုလုပ်ငန်း၏ ၀က်ဆိုဒ်တွင် ဖော်ပြလာပါက သင်၏ ကိုယ်ရေး အချက်အလက်တို့ကို အသုံးပြုကာ ယင်းကဲ့သို့သော အပြုအမှုကို တားမြစ်မည်ဖြစ်သည်။
သူတပါးအား အသရေပျက်စေသော သင်၏ အပြုအမူသည် ဥပဒေအရ အခြားသူမှ ချိုးဖောက်ကျူးလွန်သည်ဟု CNH မှ ယုံကြည်မှသာလျှင် သင်၏ကျောင်း၊ email ၊ internet နှင့် ဥပဒေပြုအဖွဲ့အသည်းများသို့ သင်၏အဖြစ်အပျက်အား ပြန်လည် အကြောင်းကြားပေးမည်ဖြစ်သည်။
သင်သည် အသက် ၁၈နှစ် (သို့) ၁၈နှစ်အောက်ဖြစ်ခဲ့လျှင်
သင်သည် အသက် ၁၈နှစ် (သို့) ၁၈နှစ်အောက်ဖြစ်ခဲ့လျှင် CNH စက်မှုလုပ်ငန်းသို့ သင်၏ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ ပေးပို့မည်ဆိုပါက မိဘ၊ အုပ်ထိန်းသူတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ရယူရမည်ဖြစ်သည်။ အသေးအဖွဲကိစ္စဆိုစေကာမူ ခွင့်ပြုချက်မပါရှိပါက CNH မှ လက်ခံမည် မဟုတ်ပါ။
ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ လက်ဝယ်ထားရှိခြင်း မူဝါဒသည် ဘာလဲ ?
သင့်တွင် CNH စက်မှုလုပ်ငန်းအဖွဲ့နှင့် သဘောတူညီချက် (သို့) CNH အချက်အလက် လက်ဝယ်ထားရှိခြင်းဇယား၌ သက်ဆိုင်ရာ သဘောတူညီ ချက်ရှိနေခြင်း (သို့) သက်ဆိုင်ရာစက်ယန္တရား၊ ၀န်ဆောင်မှုတို့နှင့် ပတ်သက်၍ လိုအပ်နေသမျှ သင့်အချက်များကို CNH မှ သိမ်းဆည်း ထားမည်ဖြစ်သည်။ သင့်အနေဖြင့် ဆက်လက်မဆက်သွယ်လိုပါက သက်ဆိုင်ရာ ၀က်ဆိုဒ်တွင် မဆက်သွယ်လိုသည့် ညွှန်ကြားချက်များအတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်နိုင်သည်။ ဆက်သွယ်မှု မပြုလုပ် လိုပါကလည်း၊ သင်၏မှတ်တမ်းများသည် စနစ်များအတွင်းတွင်သာ ရှိနေမည်ဖြစ်ပြီး CNH မှ ထပ်မံဆက်သွယ်တော့မည် မဟုတ်ပေ။
CNH စက်မှုလုပ်ငန်း (သို့) ၀က်ဆိုဒ်များတွင် ၀င်ရောက်ကြည့်ရှုရာတွင် သင်ကြည့်ရှုသည့်အချက်တို့အား CNH မှ လိုအပ်သော အချက်အထိသာထိန်းသိမ်းထားမည်ဖြစ်သည်။ CNH စက်မှုလုပ်ငန်းသည် အချက်အလက်များ အသုံးပြုရာတွင် မှန်ကန်ပြည့်စုံပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရစေရန် သင့်တော်သော အဆင့်လိုက် လုပ်ဆောင်မှုတို့ဖြင့် သေချာစွာ ဆောင်ရွက်ထားသည်။
CNH စက်မှုလုပ်ငန်းမှ ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ပတ်သက်၍ မည်သည့်အချက်များ ထိန်းသိမ်းထားသနည်း။
CNH မှ ထိန်းသိမ်းထားသော သင်၏အချက်အလက်များအား မိတ္တူယူရန်၊ တိကျသောကန့်သတ်ချက်များဖော်ပြရန်၊ အမှန်ပြင်ရန်၊ မတိကျသောအချက်များအား ပယ်ဖျက်ရန် သင့်တွင်အခွင့်အရေးရှိသည်။ ဤမူဝါဒရေးရာများနှင့် ပတ်သက်၍ မေးမြန်းစရာ၊ တောင်းဆိုစရာများရှိပါက CNH စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့် ဆက်သွယ်ခြင်းအား အောက်တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။
နယ်ခြားဖြတ်ကျော်ကိုယ်ရေးအချက်များလွဲပြောင်းခြင်းနှင့် EU- US သီးသန့်မူဝါဒကာကွယ်ခြင်း
CNH စက်မှုလုပ်ငန်းသည် UK ရှိကမ္ဘာပေါ်မှအဖွဲ့အစည်းများပါဝင်သော ဌာနချုပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ တရားဝင်အဖွဲ့အစည်းများ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့် US အပါအ၀င်နိုင်ငံတ၀ှမ်းနည်းစနစ်တကျ ဖွဲ့စည်းထားသည်။ သင်၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက် အလက်များကို CNH လုပ်ငန်းအတွင်းနှင့် သင့်စီးပွားရှိသော တိုင်းပြည်များ ဆွစ်ဇာလန်နှင့် ဥရောပတို့အပြင် ကမ္ဘာ့တိုင်းပြည် အသီးသီးသို့ လွှဲပြောင်းပေးနိုင်သည်။ အခြားတိုင်းပြည်များ၌ သင့်တိုင်းပြည်နှင့်မတူခြားနားသော သီးသန့်မူဝါဒများလည်း ရှိနေနိုင်သည်။ နေရာဒေသကို မစဉ်းစားဘူးဆိုလျှင် CNH စက်မှုလုပ်ငန်းသည် သင်၏ကိုယ်ရေးအချက် အလက်များကို သီးသန့်မူဝါဒအတိုင်း ကိုင်တွယ်ပေးထားပါသည်။
CNH စက်မှုလုပ်ငန်း America LLC နှင့် သူ၏လက်အောက်ခံကုမ္ပဏီများ မြောက်အမေရိကမှ Fiat Powertrain နည်းပညာလုပ်ငန်း တို့သည် EU-US သီးသန့်မူဝါဒကာကွယ်ခြင်းကို လေးစားလိုက်နာကြပါသည်။ Privacy Shield Framework နှင့် US Swiss Safe Harbor Frame work တို့သည် နည်းဥပဒေတွင် ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း ဥရောပနှင့် ဆွစ်ဇာလန်တို့ရှိ customer များ၊ ပစ္စည်းတင် သွင်းသူများ၊ ၀န်ထမ်းများ၏ အချက်အလက်များအား စုဆောင်းခြင်း၊ အသုံးပြုခြင်းနှင့် လက်ဝယ်ထားရှိခြင်းတို့အား သဘောတူလက်ခံကြသည်။ CNH စက်မှုလုပ်ငန်းအဖွဲ့ဖြစ်သည့် US လက်အောက်ခံ ကုမ္ပဏီများကလည်း ဥရောပစီးပွားရေး နယ်မြေမှ သတင်းအချက်အလက်တို့ လက်ခံခြင်းအပေါ် သဘောတူညီကြသည်။ သီးသန့်မူဝါဒကာကွယ်ခြင်း အစီအစဉ်များနှင့် ပတ်သက်၍ ပို၍လေ့လာလိုပါက CNH စက်မှုလုပ်ငန်းအဖွဲ့ US၏ လက်အောက်ခံကုမ္ပဏီများအကြောင်းလေ့လာလိုပါက www.privacyshield.gov.. သို့ကျေးဇူးပြုပြီးဝင်ရောက်လေ့လာပါ။ CNH စက်မှုလုပ်ငန်း၏ သီးသန့်ဥပဒေတွင် ပါဝင်သော အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်များ၊ ဥပဒေသများ၊ လုပ်ငန်းစဉ်တို့သည် သီးသန့်မူဝါဒကာကွယ်ခြင်းအတွက် ထောက်ခံပေးနိုင်ရန် အသုံးပြုသည်။ ယင်းကဲ့သို့ ပြုမှုဆောင်ရွက်ခြင်းသည် သီးသန့်မူဝါဒကာကွယ်ခြင်း နည်းဥပဒေ၌ လိုတိုးပိုလျော့ ပြုလုပ်နိုင်သည်။
CNH စက်မှုလုပ်ငန်း US လက်ဝယ်ခံကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတို့ ပြုလုပ်နိုင်ပြီး၊ U.S Federal Trade Commission ၏ အခွင့်အာဏကိုလည်း အသုံးချနိုင်သည်။
CNH စက်မှုလုပ်ငန်း၏ US လက်ဝယ်ခံ ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် အမျိုးသားလုံခြုံရေး၊ ဥပဒေခိုင်မာစေရေးတို့အပြင် အများပြည်သူဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းတို့မှ ရရှိထားသော ဥပဒေပိုင်း တောင်းဆိုလွှာတို့အား သင်၏ကိုယ်ရေးအချက်အလက်တို့နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိစေရန် လိုအပ်သည်။
အချိန်များ ပြောင်းလဲလာသည်နှင့်အမျှ ဥပဒေအသစ်များ ကွဲပြားခြားနားမှုများလည်း မြှင့်တင်လာမည်ဖြစ်သည်။ ဥပဒေအသစ်ထပ်တိုးတိုင်းတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀င်ရောက်လေ့လာရန် နေရာများတွင် အသိပေးဖော်ပြပေးထားမည်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ စာမျက်နှာအားဝင်ရောက် ကြည့်ရှုနိုင်ရန်လည်း အချိန်ပိုင်းခြားကာ တိုက်တွန်းသွားမည်ဖြစ်သည်။
အခြားသော နေရာများသို့ လေ့လာရန် ချိတ်ဆက်ခြင်းများ ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀က်ဆိုဒ်တွင် တတိယအဖွဲ့အစည်းမှ ချိတ်ဆက်ထားသော အခြားသော နေရာများသို့လည်း ၀င်ရောက် လေ့လာ နိုင်သည်။ ယင်းအဖွဲ့အစည်းတို့တွင် ၎င်းတို့၏ ကိုယ်ပိုင်နည်းဥပဒေများ ပြဌာန်းထားပြီး၊ သင်တို့အနေဖြင့် ၀င်ရောက်လေ့လာ သင့်သည်။ ယင်းဝက်ဆိုဒ်တို့အား ၀င်ရောက်လေ့လာစဉ်တွင် သင်တို့၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်တို့အား စုစည်းထိန်းချုပ် ထားမည်ဖြစ်သည်။ အခြားသော တတိယအဖွဲ့အစည်းသို့ ၀င်ရောက်ကြည့်ရှုစဉ် ဖြစ်ပေါ်လာသော ဆိုးကျိုးဆုံးရှုံးမှုတို့အား ကျွန်ုပ်တို့မှ တာဝန်ယူဖြေရှင်းပေးမည် မဟုတ်ပါ။
CNH စက်မှုလုပ်ငန်းသို့ ဆက်သွယ်ခြင်း။
ဤသီးသန့်မူဝါဒများနှင့် မေးမြန်းလိုလျှင်ဖြစ်စေ၊ ဝေဖန်အကြံပြုလိုလျှင်ဖြစ်စေ အောက်ပါလိပ်စာသို့ ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
တွဲဖက်ရုံး အမှတ်-၂၅၊ စိန့်ဂျိမ်းစ်လမ်း
ရည်ညွှန်းချက် - သီးသန့်တိုင်ကြားလွှာကဏ္ဍ
လန်ဒန်၊ SW1A 1HA